ထပ်ခိုးများ | အလှဆင်
ထပ်ခိုးများတွင် လှေကားထစ်များကို အလှဆင်ရန် စိတ်ကူးများ
မာရီယာ vazquez | | လှေခါးထစ်
လှေကားထစ်ရှိခြင်းသည် ဇိမ်ခံကားတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထပ်ခိုး၌ လှေကားထစ် မနာလိုစိတ် နှိုးဆွသည်။ ဤအခန်းများသည် ယေဘူယျအားဖြင့် ကျယ်ဝန်းပြီး ကြီးကျယ်သော လျှို့ဝှက်ရေးများကို ခံစားကြရသည်။ တစ်ခုပျော်ဖို့ သင်ကံကောင်းသလား။ ထို့နောက် သင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ယနေ့မျှဝေထားသော ထပ်ခိုးများတွင် အခန်းများအလှဆင်ခြင်းအတွက် ဤအကြံဉာဏ်များကို သင်စိတ်ဝင်စားပေမည်။
ဆောင်များ၊ ငါတို့အိမ်၏တိုးချဲ့ အနားယူအပန်းဖြေရန်၊ မိသားစုနှင့် သူငယ်ချင်းများကို စားသောက်ရန် သို့မဟုတ် ဥယျာဉ်တစ်ခု ပြုစုပျိုးထောင်ရန် ဖိတ်ခေါ်ရန် အပိုနေရာတစ်ခု ဖန်တီးပေးသည်။ ကာဗာကိုလည်း ထည့်သွင်းထားမယ်ဆိုရင် နွေဦးကနေ နောက်ဆောင်းရာသီအထိ သူတို့ကို အခွင့်ကောင်းယူနိုင်ပါတယ်။ ၎င်းကို အခွင့်ကောင်းယူပါ။
1 မတူညီသောဇုန်များကို သတ်မှတ်ပြီး ၎င်းတို့ကို အတွင်းပိုင်းနှင့် ချိတ်ဆက်ပါ။
2 ပလက်ဖောင်းများနှင့် ကစားပါ။
4 အမြင်တွေကို ချဲ့ထွင်ပါ။
5 ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနည်းသော ပရိဘောဂများကို ရွေးချယ်ပါ။
မတူညီသောဇုန်များကို သတ်မှတ်ပြီး ၎င်းတို့ကို အတွင်းပိုင်းနှင့် ချိတ်ဆက်ပါ။
သင့်လှေကားထစ်၏နေရာကို အလုံးစုံနားလည်ပြီး ၎င်းကိုယုံကြည်ပါ။ မတူညီသော ဇုန်များကို အတူတကွ ချိတ်ဆက်ထားသည်။. လှေကားထစ်သည် ကြီးမားပါက ပရိဘောဂအားလုံးကို တစ်နေရာတည်းတွင် မထားပါနှင့်၊ ကွဲပြားသောအချိန်များတွင် အခွင့်ကောင်းယူနိုင်သော ထောင့်များ ပိုမိုစည်းစနစ်တကျရှိသော လှေကားထစ်တစ်ခုရရှိစေရန်အတွက် နေရာများကို ကွဲပြားအောင် ခွဲထားပါ။
ဇုန်နှစ်ခုဖန်တီးပါ။အပန်းဖြေရန်တစ်ခု၊ စားရန်တစ်ခု။ အိမ်မှထွက်ပေါက်များကို အာရုံစိုက်ကာ သူတို့ကို ဖြန့်ဝေပါ။ အပန်းဖြေရန် ဧည့်ခန်းနှင့် လှေကားထစ်ကို ချိတ်ထားသည့် တံခါးများဘေးတွင် ထိုင်ခုံနေရာတစ်ခုထားပါ။ မီးဖိုချောင်ဘေးတွင် အစားအသောက်နှင့် အပြင်ထွက်၍ အဆင်ပြေစေမည့် အပြင်ထမင်းစား စားပွဲရှိသည်။
အတိုင်းအတာတစ်ခုဖန်တီးရန် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါသလား။ ပြင်ပမီးဖိုချောင်နှင့်အတူထမင်းစားခန်း? နွေရာသီမှာ လှေကားထစ်ကို အခွင့်ကောင်းယူရင် အဲဒါကို မစဉ်းစားပါနဲ့။ ပရိဘောဂအနည်းငယ်၊ ပါ၀င်သောအသားကင်တစ်ခုနှင့် စုပ်ခွက်တစ်ခုပါရှိသော အလုပ်မျက်နှာပြင်သည် နွေရာသီတွင် သင့်ဘဝပိုမိုလွယ်ကူစေမည့်ထောင့်တစ်ခုကို ဖန်တီးရန် လုံလောက်ပါသည်။
လှေကားထစ်သည် အလွန်သေးငယ်ပြီး အရာအားလုံးအတွက် နေရာမရှိပါသလား။ ပြီးတော့ ဦးစားပေးရပါလိမ့်မယ်။ မကြာသေးမီက သင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့မျှဝေခဲ့သော သေးငယ်သောအခန်းများကိုအလှဆင်ရန် သော့များကို အမှတ်အသားပြုထားသည့်အတိုင်း ၎င်းတို့ကို သင်မှတ်မိပါသလား။
တောင်စောင်းတွေ ဖန်တီးပြီး လုပ်တယ်။ ပစ္စည်းပြောင်းလဲမှု ဤအရာများကို အခွင့်ကောင်းယူခြင်းသည် အာကာသကို ပိုမိုသွက်လက်ပြီး ဆွဲဆောင်မှုဖြစ်စေရန်အတွက် ကြီးမားသော လှေကားထစ်များတွင် ကောင်းမွန်သောဗျူဟာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်၊ ယခင်ပုံစံသည် အမြဲတမ်းလက်တွေ့ကျသည် သို့မဟုတ် အကြံပြုလိုသည်မဟုတ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့နားလည်ပါသည်၊ လှေကားထစ်သည် အလွန်ကျယ်ဝန်းခြင်းမရှိသောကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင် ဘတ်ဂျက်ကြီးကြီးမားမားမရှိသောကြောင့် သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့တတ်နိုင်လိုသောအိမ်တွင် ကလေးများနှင့် သွားလာရခက်ခဲသောသူများ နေထိုင်နိုင်သောကြောင့်ပင်ဖြစ်၊ ဤနေရာကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပျော်မွေ့ပါ။
အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ လမ်းခင်းကောင်းတစ်ခုတွင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံခြင်းသည် အမြဲတမ်းရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအနည်းဆုံးဖြင့် အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုနှင့် ဆိုးရွားသောရာသီဥတုဒဏ်တို့ကို ခံနိုင်ရည်ရှိသောတစ်ခုကို ရွေးချယ်ပါ။ သတိလည်းထား မချော်ပါစေနှင့် မတော်တဆမှုကိုရှောင်ရှားရန်။
ကြွေခင်းများ ၎င်းတို့သည် အခင်းအကျင်းများအတွက် အကောင်းဆုံးပစ္စည်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သော်လည်း တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါ။ သိချင်ရင် ပစ္စည်းတစ်ခုစီ၏ အားသာချက်များနှင့် အားနည်းချက်များ လွန်ခဲ့သည့်တစ်နှစ်က ယခုထုတ်ဝေခဲ့သော ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကို ဖတ်ရှုရန် သင့်အား ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။ တစ်ခု သို့မဟုတ် နှစ်ခုယူ၍ ဤပြင်ပနေရာသို့ ပေါ့ပါးပြီး လတ်ဆတ်မှုကို ယူဆောင်လာရန် ၎င်းတို့ကို မြက်ခင်းတုနှင့် ပေါင်းစပ်ပါ။
ထပ်ခိုးရှိ လှေကားထစ်များသည် နာရီပေါင်းများစွာ တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်ကို ခံစားရမည်ဖြစ်သောကြောင့် သင်လုပ်သင့်သည်။ အရိပ်ဇုန်များဖန်တီးရန်စီစဉ်ပါ။. ဖုံးအုပ်ထားသော ဧရိယာသည် နွေရာသီတွင် အနားယူရန် သို့မဟုတ် စားသောက်ရန် ပိုမိုသာယာသော ပတ်ဝန်းကျင်ကို ပေးစွမ်းမည်ဖြစ်သည်။ pergola သည် ၎င်းတို့အတွက် ခံနိုင်ရည်ရှိသောကြောင့် အထူးသဖြင့် အလူမီနီယံများအတွက် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ သို့သော် စျေးသက်သာသော မိုးကာများနှင့် ရွက်လွှင့်မိုးကာများကဲ့သို့သော စျေးသက်သာသော ဖြေရှင်းနည်းများကိုလည်း လောင်းကြေးထပ်နိုင်ပါသည်။
သင့်လိန်ကုန်းပေါ်တွင် သာယာသော မြင်ကွင်းများကို သင်နှစ်သက်ပါက ၎င်းတို့ကို မပိတ်ဆို့ပါနှင့်။ သင့်အနီးအနားတွင် အခြားအိမ်များမရှိပါက သို့မဟုတ် သင်၏ privacy ကို ဂရုစိုက်ရန် လိုအပ်ပါက ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့် မြင်ကွင်းများကို အသုံးချပါ။ ဘေးကင်းရေးမှန်လက်ရန်းများ။ ကျန်ဧရိယာကို အပြင်ဘက်မျက်နှာမူပြီး ဘာမှမလွတ်အောင်ထားပါ။
ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနည်းသော ပရိဘောဂများကို ရွေးချယ်ပါ။
အကယ်၍ သင်သည် လှေကားထစ်တွင် ဧရိယာ နှစ်ခု သို့မဟုတ် သုံးခုကို ဖန်တီးရန် စိတ်ကူးထားပါက၊ အရည်အသွေးပြည့်မီသော ပရိဘောဂများကို ရွေးချယ်ရန် အရေးကြီးပါသည်။ တစ် ဒြပ်စင်များအတွက်ဒီဇိုင်းထုတ်ပရိဘောဂ ၎င်းသည် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု လျော့နည်းစေပြီး ဆောင်းရာသီတွင် စုဆောင်းရန် သင့်အား တွန်းအားပေးခြင်းမရှိပေ။ စတီးလ်ပရိဘောဂများ၊ ဓာတုအမျှင်များနှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ ပြင်ပပိတ်ထည်များသည် ဖုံးအုပ်ထားသည့်နေရာကို ဖန်တီးမည်ဆိုပါက ကျွန်းသစ်၊ ဝါး သို့မဟုတ် သဘာဝအမျှင်များဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် ပရိဘောဂများကိုလည်း ရွေးချယ်နိုင်သည်။
Modular ဆိုဖာများ ၎င်းတို့သည် မတူညီသောအသုံးပြုမှုများကို ပေးစွမ်းရန် မော်ဂျူးများဖြင့် ကစားနိုင်သောကြောင့် ၎င်းတို့သည် ဤနေရာကို အလှဆင်ရန် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင့်တွင် ဧည့်သည်များစွာရှိလျှင် ၎င်းတို့အားလုံးကို poufs အဖြစ်သုံးနိုင်သော်လည်း အပန်းဖြေလိုပါက chaise longue armchairs သို့မဟုတ် sun loungers module များဖြင့် ရေးဖွဲ့နိုင်ပါသည်။
ဆောင်းရာသီမှာ မင်းရဲ့ ကူရှင်တွေ အားလုံးကို သိမ်းထားဖို့ နေရာရှာချင်သလား။ ကျန်ဧရိယာရှိ ခုံတန်းလျားများ သို့မဟုတ် ဆိုဖာများတွင် လောင်းကစားပါ။ သိုလှောင်မှုနှင့်အတူ. ဒြပ်စင်များအတွက် ပြင်ဆင်မထားသော ပရိဘောဂများပေါ်တွင် လောင်းကြေးထပ်ရန် ဆုံးဖြတ်ပါက၊ ၎င်းတို့ကို လှေကားထစ်၏ ပိုအကာအကွယ်ထောင့်တွင် စုဆောင်းပြီး ဖုံးအုပ်ရန် လွယ်ကူစေရန် ၎င်းတို့ကို ခေါက်နိုင်သော ခေါက်သိမ်းနိုင်သည့်အရာကို ရွေးချယ်ပါ။ ဤထပ်ခိုးအခန်းများကို အလှဆင်ရန် ရွေးချယ်စရာများ အမြဲရှိပါသည်။
ကိုယ်ရေးကိုယ်တာရချင်ရင် အိုးကြီးတွေနဲ့ ထားပေးပါ။ အရပ်ရှည်သောအပင်များ လက်ရန်းများဘေးတွင်။ မျဉ်းဖြောင့်နည်းဖြင့် မလုပ်ပါနှင့်၊ ဤနေရာတွင် အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးရှိသော အပင်အုပ်စုများကို ဖန်တီး၍ အာကာသကို ပိုမိုသဘာဝကျသော နည်းလမ်းဖြင့် ပုံဖော်နိုင်စေရန်၊ အိုအေစစ်လေးများဖန်တီးရန် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနည်းသော စိမ်းလန်းသောအပင်များကို သွားပြီး အရောင်ထည့်ရန် ဧည့်ခန်း သို့မဟုတ် ထမင်းစားခန်းရှိ ပန်းအိုးငယ်များအတွက်။
ထပ်ခိုးများတွင် အခန်းများအလှဆင်ခြင်းအတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ကူးများကို သင်နှစ်သက်ပါသလား။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတင်ပြုလုပ်ခြင်း » နေရာများ » လှေခါးထစ် » ထပ်ခိုးများတွင် လှေကားထစ်များကို အလှဆင်ရန် စိတ်ကူးများ
ကြမ်းပြင်အဖုံးအဖြစ် epoxy resin ၏အားသာချက်များ